२१ मंसिर २०७८, मंगलवार १४:५० PM
१० आश्विन २०७७, शनिबार २०:२६ मा प्रकाशित
२०७७ आश्विन १० शनिबार, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या २५ हजार पुगे फेरि लकडाउन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेकोप्रति जनस्वास्थ्यविज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरुले नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनको मोडेल असफल भइसकेकोले फेरि पनि लकडाउन गर्ने निर्णय उचित नहुने बताएका छन्।
जनस्वास्थ्यविद डा. रवीन्द्र पाण्डेयले चार महिनासम्म गरिएको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाको मोडेल नेपालमा असफल भएकोले त्यसको पुनः प्रयोग कुनै हालतमा उचित नहुने बताउनुभयो। लकडाउन र निषेधाज्ञाले नेपालमा संक्रमणको स्थितिमा कुनै नियन्त्रण लिन नसकेको डा. पाण्डेको दाबी छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनअघि २५ हजार सक्रिय संक्रमित पुगे फेरि लकडाउन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर जनस्वास्थ्यविद पाण्डेयले फेरि पनि लकडाउन गरिनु भनेको निम्न आय भएका व्यक्तिहरुलाई भोकै पार्नु बाहेक अरु केही नहुने तर्क राख्नुभयो।
उहाँले अब जनस्वास्थ्य मापदण्डको कडा पालनासँगै मानिसहरुको दैनिकी सञ्चालन हुन दिनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक अवस्था विपन्न भएकाहरुलाई मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री निशुल्क प्रदान गर्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेहरुलाई कडा कारबाहीको मोडेलमा जानुपर्ने डा. पाण्डेको सुझाव छ ।
नेपालमा अहिले दिनहुँ औषत १५ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित हुनेहरुको संख्या औपचारिक रुपमा बढ्ने गरेको छ भने सोही संख्यामा संक्रमणमुक्त भइरहेका छन् ।
तर पीसीआर परीक्षण गराउन चाहनेहरुको संख्या भने उच्च रहेको टेकु अस्पताल अगाडि बिहान ३ बजे देखि नै लाग्ने गरेको भीडले देखाउँछ ।
सरकारले परीक्षणको दायरा बढाए सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार पुग्न समय लाग्ने छैन ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणका लागि दबाब नदिन आग्रह गरेको छ । काठमाडौँमा बाहिरी जिल्लाबाट आउनेहरुलाई पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट देखाएर मात्रै कोठामा छिर्न दिइएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले मानवीयता देखाउन घरधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मानवीयता नगुमाउन सबैमा आग्रह गर्नुभयो । अहिले काठमाडौंका घरधनीहरुले पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नभई दैलोभित्र छिर्न नदिएका कारण पनि मानिसहरु दिनभर झरीमा रुझ्दै पीसीआर परीक्षणका लागि लाइनमा बस्नु परेको हृदयविदारक दृष्य टेकु अस्पताल परिसरमा देखिन्छ ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले कुनै लक्षण नभई पीसीआर परीक्षण गर्न नपर्ने भएकोले त्यसरी लाइनमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारको मापदण्डमा परे निशुल्क परीक्षण गर्न चिकित्सकहरु घरमै पनि पुग्ने भएकाले आत्तिन नहुने बताउनुभयो ।
कोरोना प्रभावित विश्वका थुप्रै मुलुकहरुले लकडाउन हटाएर जनस्वास्थ्य मापदण्डको कडा पालनामा ध्यान दिएका छन् । नेपालमा पनि सोही मोडेल अपनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ ।
तर नजिकिँदै गरेको दसैँ लगायतका महान चाडपर्वका बेला मानिसहरुको आवागमन बढ्ने भएकोले कोरोना सक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता थपिएको छ । त्यसैले जनास्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा सरकारले कडाइ गर्न आवश्यक छ ।